ရထားဖြင့်အီတလီရန် complete Beginner လမ်းညွှန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်အီတလီရန် complete Beginner လမ်းညွှန်
ယင်း၏အကြီးအသောမြေဆီလွှာပေါ်သို့သငျသညျခြေလျင် step ယခုအချိန်တွင်နေဖြင့်ရထားအီတလီနှင့်အတူလွခံရဖို့အဆင်သင့် Get. သမိုင်း၏မြေယာ, ခမ်းနားဗိသုကာ, လွှမ်းမိုးသောယဉ်ကျေးမှု, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြော့, ခေတ်မီ, ပြီးတော့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့လူတွေဟာမင်းနောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်သင်မှတ်မိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်! သိချင်တယ် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု? ရထားအီတလီနိုင်ငံ ပို. ပင်အံ့မခန်းကိုသင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ဖြစ်ပါသည်!
ယခု, သင်တို့ဆီသို့သွားကြသည်ကတည်းက Romeo နဲ့ Juliet ရာပြည် ရထားနဲ့, ဤနေရာတွင်သင်ဖြစ်နိုင်အတိုင်းလိုက်နာချင်ပါလိမ့်မယ်တချို့အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များများမှာ (သငျသညျအီတလီခဲ့ဖူးဘူးနဲ့ကြှမျးကငျြစှာဘာသာစကားမပြောတတ်ကြဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်):
ရထားဇယားအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံတဝိုက်သင့် Way ကိုရှာဖွေခြင်း
Trenitalia, လူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးသားရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူအမျိုးသားရေးရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှု; ပုံမှန်မြန်နှုန်းရထား.
အီတလိုရထား, မြန်နှုန်းမြင့်ရထား / လမ်းကြောင်းများအတွက်.
အကောင်းဆုံး option ကိုရထားနဲ့အီတလီနိုင်ငံထုတ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် လုံခြုံဘက်မှာဖြစ်: စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်, ရက်စွဲများ, အချိန်နှင့်အချိန်နှင့်သင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်သင်၏ခရီးသွားမြေပုံနှင့်အကိုက်ညီဆုံးရွေးစရာကိုရှာပါ. အချိန်ဇယားနှိုင်းယှဉ်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ. သငျသညျဖြစ်နိုင်ဝေါဟာရများနှင့်အတူရောထွေးပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်အပေါ်ကိုရှာဖွေမည်အတိုကောက်ပုံစံများဖြစ်ကြောင်း Trenitalia site ကို:
ရောမမြို့ Termini (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> TE ရောမ
နေပယ်လ်ဗဟို (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> NA C.The
Florence စန်တာမာရီယာ Novella (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> Fl.SMN
ဗင်းနစ် စိန့်လူစီယာ (ကျွန်းပေါ်တွင်) -> AND. S.L.
ဗင်းနစ် Mestre (ပြည်မအပေါ်) -> MASTER
မီလန်ဗဟို (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> MI C.le
Piazza ပရ (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> GE က P.P.
ဂျီနိုအာ Stazione Brignole -> GE ကဗိုလ်မှူးချုပ်
la Spezia Centrale တို့ကို (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> ဟင်းခတ်
Pisa Centrale တို့ကို (ဗဟိုဘူတာရုံ) -> Pisa ကို C.
သငျသညျရထားအီတလီယူတဲ့အခါသင်အနက်ရောင်ထဲမှာမှတ်သားထိပ်မှာတဦးတည်းရထားဘူတာရုံ name ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြိမ်ရှိလိမ့်မည်, အနီရောင်အချို့အခြားသူများနောက်တော်သို့လိုက်; ဤသူသည်သင်တို့မှခရီးသွားလာနေသောမွို့၌အနည်းငယ်ရထားဘူတာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုပြသ, ရထားလုံးကိုရထားမှတ်တိုင်များရန်သင့်အားယူပြီးနှင့်အတူ.
သင်အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်အားဖြင့်သင့်ရဲ့အီတလီဘွတ်ကင်လုပ်ရန်ဒါမှမဟုတ်ဘူတာမှာဒါဟာ Buy သင့်တယ်?
သင်၏လက်မှတ်ကိုအီတလီနိုင်ငံသို့ရထားဖြင့်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းကောင်းမှာအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်စနစ်သည်ချွတ်ယွင်းချက်ရှိပြီးအလွန်စိတ်ချရသောဖြစ်သည်. ဘူတာ နေရာတိုင်းနိုင်ပါတယ် ပြည့်ကျပ်သော - သူစိတ်ဖိစီးမှု၏အမျိုးအစားလိုအပ်ပါတယ်, မှန်သော? သငျသညျစာအုပ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, သင်၏အဘို့အပေးဆောင်ဖို့ option ကိုပေးအပ်ထားတယ် အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအလိုအလျောက်အကြောင်းကိုအားလုံးမှန်လျှင် - သင်ကဘူတာရုံရမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းနှင့် သင့်ရဲ့လက်မှတ်ဝယ်ယူ ထိုအခါ.
သင်မည်သို့သင့်ရဲ့လက်မှတ်ရပြီဆိုတာနဲ့သင်ဟာရထားအီတလီနိုင်ငံမှ Get Do?
သငျသညျမီးရထားဘူတာရုံအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံရသည့်အခါ, သင်၏နောက် cue ကြီးမားတဲ့ကာစရာကုလားကာဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအပေါငျးတို့သရလိမ့်မယ်နေရာဖြစ်သည် သတင်းအချက်အလက်အသစ် သင်လိုအပ်. သင်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုမမွငျဘူးဆိုရငျ, ကြီးမားသောအရာတစ်ခုခုအောက်မှာရပ်နေလူတွေကိုတစ်လူအစုအဝေးအဘို့ကိုကြည့် - နဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့! ကိစ္စတွင်သင်သည်သင်၏ရထားချက်ချင်းစာရင်းစောငျ့ရှောကျဘူး, စိုးရိမ်မစတင်နိုင်ပါဘူး. သငျသညျမှာ "Partenze" မှာရှာကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ (ထွက်ခွာရာ) အစား "Arrivi" ၏ (ဆိုက်ရောက်ရာ) စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်. လူအပေါင်းတို့၏အနည်းဆုံးရှုပ်ထွေး option ကိုရထားနံပါတ်နှင့်ထွက်ခွာအချိန်အားဖြင့်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ရထားကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ, BIN "ကိုရှာပါ,"binario" အတွက် " (ပလက်ဖောင်း). သငျသညျခွဲထားခဲ့သည်ကြောင်းရင်းတပြိုင်နက်, သငျသညျသှားဖို့မှန်!
တစ်ခါတုန်းကကြားသိဟာသရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်: သငျသညျအရုပ်ဆိုးသို့မဟုတ်အထီးကျန်ခံစားရအခါတိုင်း, ရထားအီတလီနိုင်ငံကိုသွား. သငျသညျကွညျ့ရှုဘယ်လိုလျောက်ပတ်စွာအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ဒေသခံယောက်ျား "Bella ကြွေးကြော်ရကြမည်!" သင်အရင်သွားပါ. ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော, မှန်သော? ကြာကြာတစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့, မှာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ဘွတ်ကင် saveatrain.com နှင့်အီတလီများအတွက်ထုပ်ပိုးစတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-to-italy-by-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
မီးရထားလက်မှတ် ရထားခရီးသွား travelitaly